China KENNEDE 360 LED Camping Lantern ho an'ny fampiasana ivelany Fanamboarana sy orinasa | Kennedy
Mpanazava 360° mahasarika maso: Ny tontonana maivana 360° dia afaka manome tselatra fanamiana sy malefaka kokoa, tsy manahy ny hamoha ny olona eo akaikinao, anisan'izany ny zanakao! Izy io dia manome anao fotoana mampiadana sy miala sasatra, ary mety tsara koa ho an'ny famakiana amin'ny tontolo mamirapiratra.
Ny fiainana bateria matanjaka kokoa sy lava kokoa: Mahazoa tombony amin'ny bateria azo averina ao anatiny izay haharitra mihoatra ny zavatra ilainao sy antenainao - hatramin'ny 100 Ora miaraka amin'ny hazavana mirehitra hatrany amin'ny famirapiratana ambany indrindra. Miaraka amin'ny fiampangana tokana dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra izany, ka tsy mila manahy momba ny tsy fahampian'ny herinaratra tampoka na ny fampiasana tsy misy tariby.
Fomba roa famatsiana herinaratra - Ny fanilo lehibe dia azo ampangaina amin'ny alàlan'ny voltase 220V na 110V ho an'ny jiro bateria Lead-acid, ary tariby USB ho an'ny entana bateria Lithium ampiasainao isan'andro. Rehefa tojo fahatapahan-jiro izy, dia azo ampiasaina amin'ny bateria Lead-acid na Lithium bateria ny fanilo, mba hanalavirana anao amin'ny alina maizina.
Fomba jiro efatra - Fiaraha-mihetsika lehibe hifehezana ny hazavana, ny ankamaroantsika dia manana hazavana matanjaka / malemy, ny zavatra sasany dia manana hazavana manjavozavo, ny dimmer dia afaka mifehy ny hazavana Max sy Min amin'ny alàlan'ny switch.
Lanterne camping LED rechargeable
Battery: 3.7V1800mAh Lithium bateria
Jiro LED: 7.5W White + 7.5W Ny hazavana mafana azo amboarina
Fandoroana masoandro: Tsia
Fonosana: 1 pcs/box, 30 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 67x40.6x36cm
Mahazaka rano - Miasa tsara amin'ny orana maivana na andro misy lanezy, indrindra mety ho jiro fiasana, jiro fikarohana ary jiro vonjy maika misy naoty mahatanty rano.
FAMPIASANA SY FAMPIASANA - Jiro lehibe mazava 360 degre manome taratra lava sy midadasika kokoa ho an'ny fahitana tsara kokoa. Fametrahana jiro 3 samy hafa miaraka amin'ny hook mora entina & mihantona ho an'ny fitoniana.
Rechargeable lafiny telo LED camping lantern
Batterie: 2x 4V 2000mAh batterie Lead-acid azo rechargeable
Jiro LED: 3x 9W LED hazavana azo amboarina
Fonosana: 1 pcs/box, 15 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 57x34.6x25.8 cm
Rechargeable roa lafiny LED camping lantern
Batterie: 4V 3000mAh batterie Lead-acid azo rechargeable
Jiro LED: 2x 16W LED hazavana azo amboarina
Cable na plug: fiampangana tariby herinaratra AC, fiampangana socket 6V DC
Haben'ny baoritra: 54.5x43.8x24 cm
Rechargeable lafiny efatra LED camping lantern
Batterie: 4V 4000mAh batterie Lead-acid azo rechargeable
Jiro LED: 4x 9W LED hazavana azo amboarina
Haben'ny baoritra: 52.5x39.6x27 cm
Batterie: 4V 2000mAh batterie Lead-acid azo rechargeable
Jiro LED: 2x 10W LED hazavana azo amboarina
Famoahana herinaratra: Power bank 5V USB output
Fonosana: 1 pcs/box, 24 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 65.6x44.2x24.7 cm
Battery: 3.7V1200mAh Lithium bateria
Jiro LED: 25W LED hazavana azo amboarina
Fonosana: 1 pcs/box, 40 pcs/carton
Haben'ny baoritra: 54.5X43.7X40cm
Batterie: 3.7V7200mAh Lithium bateria
Jiro LED: 61W LED hazavana azo amboarina
Haben'ny baoritra: 47.8X34.5X23cm
teo aloha: Fanilon'ny camping azo averina amin'ny vonjy taitra
Manaraka: Jiro jiro LED miaraka amin'ny jiro alina ho an'ny fampiasana an-trano